merolagani - लगानीकर्ताको खाताबाट जनता बैंकको शेयर गायव, कहाँ हरायो शेयर ?
लगानीकर्ताको खाताबाट जनता बैंकको शेयर गायव, कहाँ हरायो शेयर ?
Jan 13, 2020 06:56 PM Merolagani
लगानीकर्ताको खाताबाट जनता बैंकको शेयर एकाएक गायव भएको छ । जनता बैंकको शेयर ग्लोबल आइएमई बैंकको नाममा स्थानातरण गर्ने प्रकृयामा रहेका कारण लगानीकर्ताको डिम्याट खाताबाट शेयर हराएको हो ।
'स्थानान्तरण गर्ने प्रकृयामा रहेका कारण लगानीकर्ताको डिम्याट खाताबाट शेयर हराएको हो' सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका प्रवक्ता शुरेस न्यौपानेले भने । मर्जर प्रकृया सकिएपछि शेयर मिलान गर्न कम्पनीहरुको शेयर लगानीकर्ताले दुई दिन चलाउन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरिएकाे हुन्छ । सोही कारण शेयरधनीको खाताबाट जनता बैंकको शेयर चलाउन नमिल्ने भएको हो ।
जनता बैंकका शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर सोमबार रातिनै ग्लोबल आइएमई बैंकको नाममा परिवर्तन भइ शेयरधनीको नाममा जम्मा हुने न्यौपानेको भनाई छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले गत मंसिर २० गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । मर्जर सम्झौता पश्चात ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको असार २२ गते आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोक्का छ ।
एकीकृत कारोबार सुरु भएको झण्डै ढेड महिनापछि जनता बैंकको शेयर ग्लोबल आइएमई बैंकको नाममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुने तयारीमा रहेको छ । लगानीकर्ताको खातामा शेयर आएसँगै दोस्रो बजारमा कारोबार सुचारु हुने छ । बैंकको दोस्रो बजारमा अर्काे सातादेखि कारोबार खुल्ने नेप्सेले जानाएको छ । 'सम्पूर्ण प्रकृया पुगिसकेको छ । अर्को सातादेखि कारोबार खुल्छ' नेप्से स्रोतले भन्यो ।लामो समयसम्म दुवै बैंकको शेयर कारोबार रोक्का हुदा लगानीकर्ताहरुले आफूहरु मर्कामा परेको बताउदै आएका छन् ।
तामाकोशीको शेयर संचयकोषका कर्मचारीलाई बढी दिनु घुस दिए जस्तै हो
विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण अवयव पूर्वाधार नै हो । हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरुमा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराउने र त्यसपछि उत्पादन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या एकैदिन ८२ हजारले बढ्यो !
Jan 18, 2021 05:42 PM
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओमा १४ अर्बको शेयर माग,१.८७ गुणा बढी आवेदन
नेपालमा थप ३२२ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि, उपत्यकाका १६३ जना
बैंक अफ काठमाण्डूको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
Jan 18, 2021 04:32 PM
१७ अंक बढेर नेप्से नयाँ उचाइमा, १७ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार